Moments Neshamwari 1
Tinogona sei kutaura izvo zvatiri muiri yedu yekupedzisira? yakabvunza mushanyi humwe husiku mushure mehurukuro.
Nzira chete yekuudza ndeyekuziva zvechokwadi sekuti isu takamborarama nei. Iyo fosi yakaunzwa nezivo iyi ndangariro, yekuraira kwepamusoro. Mukushayikwa kweizvozvo, mumwe nemumwe anogona kuumba fungidziro yezvaakange ari kare neizvo iye zvaainyatsoda iye zvino Zvine musoro kufunga kuti, kana tine chero sarudzo mune iyi nyaya, hatingasarudze sechimiro kana nharaunda dzataizouya mairi, dzakadai seidzo dzisina kukokwa nezvatinofarira kana kusimudzira uye, kune rumwe rutivi, kana isu hatina sarudzo, ipapoka, mutemo unodzora kubereka muviri haungatiise mumamiriro asina kufanirwa nebudiriro.
Tinonzwa tichinzwira tsitsi kana kupesana nezvimwe zvinangwa, vatambi, mapoka evanhu, mhando dzevanhu, mhizha, hunyanzvi, hunyanzvi uye basa, uye izvi zvinogona kuratidza kuti takamboshanda kana kupesana neizvi pamberi. Kana isu tichinzwa tiri kumba kana kurwara-zorora munharaunda yakanaka kana yakaipa, izvo zvaizoratidza kune zvatakanga tambojaira. Tsika, yajaira kuzvivirira zuva rakasviba pane imwe nzira yakasviba kana mumugwagwa une guruva, yaisazonzwa wakasununguka munharaunda ine runyararo, murabhoritari yemakemikari, kana padumbu. Kana mumwewo anga ari murume anoshanda anoshanda, akagadzirwa nehunyanzvi kana nehungwaru, aisununguka uye achizununguka pazuva, asina kushambwa, akapfeka mbatya.
Isu tinogona nekunyatso tarisa izvo zvatiri muhupenyu hwapfuura kwete nehupfumi kana chinzvimbo parizvino, asi kune izvo zvido zvedu, zvishuvo, zvatinofarira, zvatisinga farire, kudzora zvishuviro, kutikwevera munguva iripo.
Tinogona kutaurira kuti takazvarwa kakawanda sei?
Muviri unozvarwa uye muviri unofa. Iwo mweya hauberekwa kana kufa, asi unopinda mumuviri unozvarwa uye unosiya muviri parufu rwemuviri.
Kuti uzive kuti mweya yakawanda yakararama mweya wakadii pasi pano, tarisa kumarudzi akasiyana iye zvino ari munyika. Funga nezve kukura kwetsika, kwepfungwa uye pamweya kwemunhu wemuAfrica, kana South Sea Islander; uyezve izvo zveNewton, Shakespeare, Plato, Buddha, kana Kristu. Pakati pezvakanyanya izvi funga nezvemakisi akasiyana ekuvandudzwa ayo anounzwa nevanhu. Mushure meizvi bvunza kuti "ini" ndinomira papi pakati pezvakanyanya.
Mushure mekutarisa chinzvimbo uone kuti "ini" wakadii wadzidza kubva mune zvinoitika zvehupenyu hwazvino-munhuwo zvake anodzidza asi zvishoma - uye ndoita sei "ini" kuita izvo "ini" zvandakadzidza. Mushure memubvunzo uyu unonakidza, tinogona kunge tichiumba imwe pfungwa yenhamba dzezvinofanirwa kunge zvakave zvakave zvakafanira kuve zvakave zvakave zvakagarwa kuitira kuti tisvike kunyange nyika iripo.
Iko hakuna nzira yekuti chero munhu mumwechete ataure kuti akamborarama kangani zvisati zvaitika asi neruzivo chairwo uye kuramba uchiziva kubva zvakapfuura. Dai akaudzwa kuti akararama kaviri kana makumi mashanu ezviuru nguva iyo ruzivo rwacho haruzomubatsire, uye aisazozvikwanisa kunze kwekuziva kunobva mumweya wake. Asi nemuenzanisiro wakapihwa tinogona kunge tichiumba imwe pfungwa yemamirioni amakore kuburikidza neatinofanira kunge takasvika pakusvika ikozvino mamiriro ezvinhu.
Isu tinoziva here pakati pekuzvarwa kwedu patsva?
Tiri. Isu hatisi kuziva nenzira yakafanana neyatiri mukati mehupenyu mumuviri. Nyika ino ndiyo munda wekuita. Mariri munhu anogara uye anofamba uye anofunga. Munhu chisungo chiri kugadzirwa kana kuumbwa nevarume vanomwe kana nheyo. Parufu chikamu chemwari chemunhu chinozvipatsanura kubva pachinhu chakakora, uye nheyo dzehumwari kana varume vanobva vagara mune mamiriro kana mamiriro akatemerwa nepfungwa nezviito kuburikidza nehupenyu hwese. Iyi nheyo dzehuMwari pfungwa, mweya, uye mweya, izvo, pamwe nezvinoshuvira zvakapfuura, zvinopinda mune yakanakira mamiriro akasarudzirwa nehupenyu hwepanyika. Aya mamiriro haagone kuve akakwirira kupfuura zvaifungwa kana pfungwa panguva yehupenyu. Sezvo idzi nheyo dzichisunganidzwa kubva kune zvakasakisa zvinhu chikamu ivo havazivi zvakaipa zvehupenyu. Asi ivo vanoziva, uye ndokurarama kunze kwezvibodzwa zvakave zvakaumbwa munguva yehupenyu ichangopera. Ino inguva yekuzorora, izvo zvakafanira kuti mweya kufambira mberi seyazorora manheru zvinodikanwa kuti zvikwane muviri nepfungwa zvezviitiko zvezuva rinouya.
Parufu, kupatsanurwa kweuMwari kubva kune izvo zvinofa kunobvumira kufara kwevapenyu kubva kune izvo zvinangwa. Iyi inzvimbo inoziva pakati pekuzvarwa patsva.
Ndedzipi pfungwa dze theosophical dzekuzvarwa kwaAdamu naEva?
Pese pakabvunzwa uyu mubvunzo weiyo theosophist wakonzera kunyemwerera, nekuti kunyangwe zano raAdamu naEve rekuve vanhu vaviri vekutanga vanogara munyika ino rakaratidzwa mukusajeka kwaro nekuferefetwa kwesainzi kwazvino, zvakadaro mubvunzo kazhinji panouya.
Iye murume ane ruzivo ane ruzivo anobva ataura kuti shanduko inoratidza iyi ngano kuti ingano. Iyo theosophist inobvumirana neizvi, asi ichiti nhoroondo yekutanga yerudzi rwevanhu yakachengetwa mune iyi ngano kana ngano. Chakavanzika Dzidziso chinoratidza kuti mhuri yemunhu mukutanga kwayo uye mamiriro epamusoro aive asiri sezvaari ikozvino, akagadzirwa nevarume nevakadzi, asi kuti pachokwadi pakanga pasina bonde. Izvo zvishoma nezvishoma mukukudziridzika kwechisimba munhukadzi bonde kana hermaphroditism, yakagadziriswa mune mumwe nemumwe munhu. Izvo zvichiri gare gare zvakagadziridzwa izvo zvepabonde, izvo vanhu panguva ino zvakakamurwa.
Adamu naEva hazvireve murume mumwe nemukadzi mumwe, asi vanhu vese. Iwe neni takava Adhama naEvha. Kuberekwazve kwaAdamu naEvha ndiko kuberekwazve kwemweya wemunhu mumiviri mizhinji, mune dzakawanda nyika, uye kuburikidza nemadzinza mazhinji.
Ndeipi urefu hwenguva yakatarwa pakati pekuzvarwa patsva, kana paine chero nguva yakatarwa?
Izvo zvakanzi nguva iri pakati pekuzvarwa kwemukati, kana kubva panguva yekufa kwemuviri mumwe kusvika mweya watora nzvimbo yayo yekugara mune imwe yakazvarwa munyika, anenge makore gumi nemashanu. Asi izvi hazvireve kunoshanda kune vanhu vese, uye kunyanya kwete kune anoshingairira-yemazuva ano murume wokumadokero.
Munhu akanaka anoshuvira kudenga, anoita mabasa akanaka munyika ino uye ane zvinonakidza uye fungidziro yakajeka, munhu anoshuvira kusingagumi kudenga, anogona kuve nedenga kwenguva huru, asi zvakachengeteka kutaura kuti zvakadaro kwete munhu wepakati pazuva razvino.
Hupenyu munyika ino ndiyo munda wechiitiko munodyarwa mbeu. Denga inzvimbo kana mamiriro ezororo iro pfungwa rinozorora kubva pakubata kwaro uye richishanda muhupenyu kuti zvingaitwazve. Iyo nguva mushure mekunge pfungwa yadzoserwa kumashure zvinoenderana neizvo zvaakaita muhupenyu uye nekwaakaisa iyo pfungwa, nekuti pese paunofunga kana iko kushuva kuri kunzvimbo iyo kana chimiro pfungwa ichaenda. Iyo nguva haifanirwe kuyerwa nemakore edu, asi asi nekugona kwepfungwa mukunakidzwa mune chiitiko kana kuzorora. Chinguvana pane imwe nguva chinoita sechisingagumi. Imwe nguva inopfuura senge chinguru. Chiyero chedu chenguva, saka, hachisi mumazuva uye makore anouya uye anoenda, asi mukukwanisa kuita mazuva ano kana makore akareba kana pfupi.
Iyo nguva yakatarwa yekugara kwedu kudenga pakati pekuzvarwa patsva. Mumwe nemumwe anozvigadza iye. Mumwe nemumwe munhu anorarama hupenyu hwake. Nekuda kwekuti imwe neimwe inosiyana zvakadzama kubva kune imwe neimwe hapana chirevo chakajeka chekuti inguva inogona kuitwe kunze kwekunge mumwe nemumwe achigadzira nguva yake amene nemifungo yake uye zviito, uye yakareba kana ipfupi sezvaanogadzira. Izvo zvinoita kuti munhu atangezve kubereka mune isingasviki gore, asi izvi zvisina kujairika, kana kuti kuwedzera nguva kuzviuru zvemakore.
Isu tinochinja hunhu hwedu kana tadzokera pasi pano?
Isu tinoita nenzira imwecheteyo iyo tinoshandura sutu yezvipfeko kana yakashandira chinangwa chayo uye isingachadiwi. Hunhu hwunogadzirwa nechinhu chechimiro chakasanganiswa muchimiro, chakasimbiswa nenheyo yehupenyu, chakatungamirwa nekusimudzirwa nechishuwo, nematanho akadzika epfungwa anoita mukati mavo kuburikidza nemanzwiro mashanu. Uku ndiko kusanganisa kwatinodaidza hunhu. Izvo zvinongovapo zvenguva yemakore kubva pakuzvarwa kusvika kurufu; inoshanda sechiridzwa chinoshanda uye kuburikidza nacho icho pfungwa chinoshanda, chinosangana nenyika, uye inowana hupenyu mariri. Parufu, hunhu uhwu hwakaiswa parutivi uye hunodzokera mune izvo zvemidzimu zvepasi, mvura, mweya, uye moto, kubva kwairi kukorwa uye kusanganisa. Pfungwa dzemunhu dzinobva dzapfuurira kune dzayo nzvimbo yekuzorora mushure mekunakidzwa nahwo kunovaka uye kunopinda humwe hunhu kuenderera mberi nedzidzo yayo nezviitiko zviri munyika.